विदेश जान खोप लगाएर मात्र पुग्दैन, खोप कार्ड प्रमाणीकरण समेत गराउन पर्छ, कँहा गएर गराउने ?? - Samaj Patra
विदेश जान खोप लगाएर मात्र पुग्दैन, खोप कार्ड प्रमाणीकरण समेत गराउन पर्छ, कँहा गएर गराउने ??
साउन ११, २०७८ साउन ११, २०७८ - by Samaj Patra
सरकारले खोप कार्ड प्रमाणीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। अहिले काठमाण्डौको टेकुमा रहेको शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालबाट मात्रै खोप कार्डको प्रमाणीकरण हुँदै आएको छ ।
अब अरु अस्पतालबाट पनि खोप कार्ड प्रमाणीकरण गर्ने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा खोप कार्डमा विवरण भर्न उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि खोप कार्ड प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र त्यसको लागि घण्टौँ लाइनमा उभिनुपर्ने अवस्था आएपछि यसलाई केही व्यवस्थित बनाउने तयारी भएको हो ।
टेकु अस्पतालमा आज पनि खोप कार्ड प्रमाणीकरणको लागि बिहानैदेखि भीड छ । भीडलाई व्यवस्थित गर्न आजदेखि ४८ घण्टाभित्र विदेश जानुपर्ने व्यक्तिको मात्र खोप कार्ड प्रमाणीकरण गर्ने अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अनुप बास्तोलाले बताउनुभयो ।
तीन महिनापछि विदेश जानेहरु पनि अहिले लाइन बस्न आएको भन्दै उहाँले आजदेखि अब ४८ घण्टाभित्र विदेश जानेहरुको मात्रै खोप कार्ड प्रमाणीकरण गर्ने बताउनु भएको हो ।
यस्तै भीडलाई व्यवस्थित गर्न टेकुमा अर्को काउन्टर खोल्ने पनि जानकारी दिनुभयो । खोप कार्ड प्रमाणीकरण गर्न जानेको भीडले हिजो अस्पतालका अरु सेवा समेत प्रभावित भएको थियो । टेकु अस्पतालले हिजो १४ सयभन्दा धेरै खोप कार्ड प्रमाणीकरण गरेको थियो । अस्ति सात सय मात्रै कार्डको प्रमाणीकरण भएको थियो । उज्यालो नेपाल न्युज बाट
कार्तिक ४, २०७८ कार्तिक ४, २०७८
पहिलोपटक अनलाइनबाट जनगणना गरिँदै
कार्तिक ३, २०७८ कार्तिक ३, २०७८
Previous Article नेपाल लाईफका मालामाल लगानीकर्ताः १०० कित्ता सेयर किनेको १० वर्षमा ३५.६० लाख मूल्य !
Next Article श्रीमानलाई को रोनाले लग्यो, पेटमा ८ महिनाको बच्चा हुर्किदै छ अब मैले यो बच्चालाई कसरि जन्म दिउ ?
कार्तिक ४, २०७८ कार्तिक ४, २०७८ - by Samaj Patra
४ कात्तिक, जनकपुरधाम । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले जनकपुरधामस्थित खानेपानी संस्थान कार्यालयका निमित्त प्रमुखलाई दुर्व्‍यवहार गरेका छन् । बिहीबार लाठी र बाँसको भाटासहित कार्यालय पुगेका जनमत कार्यकर्ताले निमित्त …
साउन १३, २०७८ साउन १३, २०७८ - by Samaj Patra
कतिपय यस्ता हुन्छन्, जो पुरुष महिला र पुरुष दुबैसँग सराबरी आकर्षित हुन्छन् । शारीरिक रुपमा निकट हुन खोज्छन् । यस्ता प्रवृत्ति भएका व्यक्तिलाई बाइसेक्सुअल वा द्वलैगिकता भनिन्छ ।बाइसेक्सुअल हुनु व्यक्तिको …
पतिबाट अलग्गिइन् पूर्व पोर्नस्टार मिया
साउन ११, २०७८ साउन ११, २०७८
बैशाख ३१, २०७८ बैशाख ३१, २०७८
नेपालगन्जको राझामा होटेल संचालक सहित यौ*न व्यवसाय गर्नेहरु प*क्राउ (नाम सहित)
बैशाख ९, २०७८ बैशाख ९, २०७८
नेपालमा कति छन् पुरुष यौ,न ब्यवसायी ?
फाल्गुन ९, २०७७ फाल्गुन ९, २०७७